🥇 ▷ Samsung ayaa laga yaabaa inay diyaarinayso Galaxy Note mid ka jaban ✅
Samsung ayaa laga yaabaa inay diyaarinayso Galaxy Note mid ka jaban
Runta waa in loo sheegaa. Galaxy Note Waxay shaki la’aan yihiin qalab aad u fiican. Si kastaba ha noqotee, iyaguna waa weerar lagu qaado boorsada qof kasta. Hadda sanadka soo socda wax walba way is beddali karaan. Tani shaki la’aan waxay u noqon doontaa war wanaagsan kuwa doonaya inay gacmahooda ku helaan Galaxy NoteIn kiiskan ay noqon doonto 11 iyada oo aan la iibin kelyaha. Laakiin muxuu Samsung u diyaarinayaa shaybaarka sirta ah si kastaba ha noqotee?
Sida laga soo xigtay SamMobile, Samsung waxay soosaaraysaa aalad leh nambarka nambarka ‘SM-N770F’ oo aan u muuqan mid ku habboon mid ka mid ah safka hore ee shirkadda. Cabbirka SM-Nxxx wuxuu had iyo jeer ku xiran yahay moodooyinka sumadaha leh. Galaxy Note. Si kastaba ha noqotee, aaladaha cusub waxay leeyihiin lambarada SM-N9xx. Tani waxay horseedaysaa goobta ay samayso inay rumaystaan ​​in Samsung ay soo saareyso nooc ka jaban.
Haatan wax aad u yar ayaa laga ogyahay aaladan. Tani waa sababta oo ah horumarku wuxuu umuuqdaa marxalad hore. Si kastaba ha noqotee, SamMobile waxay ogaatay xoogaa macluumaad ah oo ka hadlaya 128 GB kaydinta gudaha. Haddii la fidin karo iyo in kale, si kastaba ha noqotee, weli ma jirto hab lagu ogaado.
Laakiin noocee ah casriga casriga ahi waxay noqon kartaa?
Waxay ugu dambeyntii noqon kartaa nooc ka mid ah Galaxy Note 10e.
Macluumaadka ku faafinaya internetka ayaa sheegaya in Samsung ay ku soo biiri doonto taxanaha Galaxy S e Galaxy Note sanadka soo socda. Sida muuqata khadka cusub waxaa loo magacaabi doonaa Galaxy One waxaana laga yaabaa inuu ku jiro aalad la mid ah Galaxy Note 10e. Taasi waa, ka taagan meel ka hooseysa Galaxy S11, laakiin ka sarreysa Galaxy S11e.
Hadey arintu sidaa tahay, taleefanka casriga casriga ah wuxuu u egyahay in la bilaabi doono dhamaadka bisha Feebaraayo, oo ay weheliso inta hartay. Galaxy S11.
Sida iska cad weli waa xilli hore in laga hadlo qiimaha. Si kastaba ha noqotee maaha wax aad u adag in la qiyaaso qiimaha. Markaad eegto qiimaha S10 iyo baaxadda Xusuusta ma noqon doonto wax la yaab leh in Ogeysiiska cusubi ku kacayo 799 Euros. Taasi waa, qiimaha ka sarreeya wixii loo maleyn lahaa Galaxy S11e.
Baro dhammaan Samsung Galaxy oo heli doona Android 10
Samsung Galaxy S11 waxay lahaan doonaan kamaradaha ugu fiican abid
XUSUUSTA 10 ayaa si dhif ah u gaadhay suuqa, laakiin waxaa jira hadal Galaxy S11!
Samsung Galaxy S10 wuxuu Noqonayaa Ogeysiiska 10 oo leh casriyeyn cusub!